Yunivarsiitiin Kalifoorniyaa onnee namtolcheetti fayyadamuun umrii dhukkubsattuu dheeresse jedha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Yunivarsiitiin Kalifoorniyaa onnee namtolcheetti fayyadamuun umrii dhukkubsattuu dheeresse jedha
Yunivarsiitiin Kalifoorniyaa onnee namtolcheetti fayyadamuun umrii dhukkubsattuu dheeresse jedha
Qaamni namaa kanniin akka onnee, sombaafi tiruu hir’achuun ykn dhukkubsachuun du’atti nama geessa. Yaalaan fayyisuun alatti kan biraatiin bakka buusuun waan yaadamu ykn danda’amu hinturre- hanga yeroo dhiyootti. Amma garuu, guddinni saayinsiifi teknolojii fayaa sadarkaa onnee, sombaa, tiruufi qaama namaa biraas wol’anuu bira ce’ee gara omishuutti seeneera. Eeyyen omishuu! Gara funduraatti kan onneen dadhabde ykn tiruun tortorte qaama namtolchee worshaalee keessatti omishamaniin bakka buufachuun waan yeroo dheeraa fudhatu hinfakkaatu. Imalli keenya garasitti fuullefachuu isaatiifis wonti agarsiisan baay’achaa dhufaniiru. Saayinisiifi dhala namaatiif kuni oduu gaariidha.
Jiddu galeessi fayyaa Yunivarsiitii Kalifoorniyaa ifa kan godhe dhibamaa isaa onnee namtolcheedhaan du’ a irraa hanbisuu isaati. Akka ibsa yunivariistii kanaatti dhibamtuu rakkoo onnee qabdu takko rakkoon isii hamaa ta’uu irraa kan ka’e onnee nama du’ee kennaadhaan argamu eeggachuudhaaf yeroo hinqabdu turte. Falli ogeeyyii fayya kanniinitti mul’ate onnee namtolcheen lubbuu isii tursiisuu ture. Yaalan, onnee guutuudhaan. Ittis milkaayan. Dhukkubsattuun tuni qarqaarsa addaatiin alatti onnee namtolcheen torbaan muraasaaf jirachuu dandeetteerti. San booda onnee uumamaa kennaadhaan kan argatte.
Onneen namtolcheen ammatti hir’ina tokko qobdi. Innis onneen tuni yeroo dheeraadhaaf kan hintajaajille ta’uu isiiti. Tajaajilli onnee namtolchee kuni ammatti torbaan muraasa irratti kan daangeffame. Innis hanga dhukkubsataan tokko onnee uumamaa kennaadhaan argatuuf qofa. Hangasiif garuu onneen namtolcheen riqicha jiruu ta’uudhan dhibamaa boqonnaa tokkoo isa biraatti ceesisti jechuudha. Kunumtuu waan guddaadha. Yeroon onneen namtolcheen ganna hedduuf dhala namaa tajaajiltus fagoo hinfakkaatu, bifa kanaan.
Qaama namaa isa rakkoo qabu namtolcheen bakka buusuuf qorannoo babal’atu geggeeffamaa jira. Onneen namtolcheedhaan namni torbaan 18 jiraachuu danda’eera. Meeshaan adda addaa onneen dadhabde akka dhiiga tamsaastu godhu ykn dhayata onnee sirreessu kan hedduminaan dhukkubsattoota onnee jiraachisaa jiru ta’uus hindagatinaa.Gurri namtolcheen dhageettii namaa fooyyessuu irratti shoora guddaa taphataa jira. Teknolojiin harkaafi miila cite namtolcheen bakka buusuu dagaagaatiin kan dhufe. Sombi namtolcheen tajaajila laataa jiraahcuu qofa osoo hintaane hedduus abdachiisa ta’uu isaati kan dubbatamu. Sadarkaan teknolojiin tiruu omishuu irra jiru ammatti tiruu miidhamte seelii tiruu irraa akka deebitee margitu godhuu irratti qofa kan daangeffame. Yaaliin kuni tiruu ni supha. Hanga namni tokko tiruu kennaan argatuufis tajaajila tiruun uumamaan laattu laataa dhukkubsataa tokko lubbuudhaan tursiisa.
Teknolojiin 3D yaalii qaama namtolchee tajaajila quubsaa laatu argamsiisuuf qorattoonni godhan kan deeggaruufi saffisiisu ta’uu isaati kan gabafamaa jiru.
Previous articleHidhattoonni garee Bokoo Haraam kaaba-baha Naayjeeriyaatti 150 ajjeesan
Next articleGanzabee Dibaabaa Paris Diamond League injifatte